UHF TV panel antenna သည် UHF frequency တွင်အသုံးပြုသည့် အသုံးအများဆုံး TV transmitting အင်တင်နာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ တီဗီရေဒီယိုစခန်းတစ်ခု ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင် လက်လွတ်မခံနိုင်ဘူး။ ဤစာမျက်နှာကို လိုက်ကြည့်ခြင်းဖြင့် UHF TV panel antenna အကြောင်းကို အခြေခံနားလည်ကြပါစို့။
UHF TV Panel Antenna အကြောင်းအားလုံး
တီဗီထုတ်လွှင့်သည့် အင်တင်နာသည် တီဗီအချက်ပြမှုများကို သိသိသာသာ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေနိုင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ ဒါပေမယ့် TV panel antenna က TV transmission မှာ ဘာကြောင့် ဒီလောက်နာမည်ကြီးတာလဲ။ UHF TV panel အင်တင်နာအကြောင်း အတိုချုံး မိတ်ဆက်ကြပါစို့။
UHF TV panel antenna သည် လေဝင်လေထွက်ရှိ TV တွင် အသုံးပြုသော TV transmitting antenna အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို UHF လှိုင်းနှုန်းအကွာအဝေးတွင် 470 မှ 890 MHz ဖြစ်သည့် UHF လိုင်းများ 14 မှ 83 ၏ ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေးဖြစ်သည့် UHF လှိုင်းနှုန်းအကွာအဝေးတွင် အသုံးပြုပါသည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများစွာဖြင့် တီဗီထုတ်လွှင့်သူများသည် အများပြည်သူအတွက် UHF TV ထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
UHF TV panel antenna ကို UHF TV ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် point-to-point transmission တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရုပ်သံလွှင့်သူများသည် မှတ်တမ်းတင်ထားသော ပရိုဂရမ်များကို TV transmitter station သို့ ပို့ရန် လိုအပ်ပါက၊ စတူဒီယို transmitter link system ကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လွှင့်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့နောက် ရုပ်သံထုတ်လွှင့်သူများသည် UHF TV panel အင်တင်နာအား တီဗီထုတ်လွှင့်ခြင်းအင်တင်နာအပြင် TV လက်ခံအင်တင်နာအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။
UHF TV panel antenna တွင် အသံအတိုးအကျယ် အနည်းငယ်ရှိသည်။ သယ်ယူရလွယ်ကူပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်ခြင်း၏ အားသာချက်များနှင့်အတူ သင်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် လေတိုက်နှုန်းကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးခြင်းဖြင့် လေအားခုခံနိုင်စွမ်း အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။
FMUSER FTA-2 High Gain Dual-Pol Slant UHF TV Panel Antennas Package ကို ရောင်းချရန်
ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်၎င်းကိုအလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်ပြီးဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းအား ကွဲပြားသောထုတ်လွှင့်မှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် ပြီးပြည့်စုံသော UHF TV panel အင်တင်နာခင်းကျင်းတစ်ခုအဖြစ် အလွယ်တကူပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
Gain နှင့် Bandwidth
UHF TV Panel Antenna သည် directional antenna တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၊ ၎င်း၏အမြတ်မှာ omnidirectional TV transmitting antenna ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် omnidirectional TV antenna array တစ်ခုကို UHF TV panel antennas နှင့် ပေါင်းစပ်ပါက၊ ၎င်းတွင် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော bandwidth ရှိသည်
လုံး၀ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောကြောင့် လေနှင့် စိုစွတ်သောလေကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချနိုင်သည်။ ၎င်းသည် UHF တီဗီအကန့်အင်တင်နာ၏ တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းနှင့်အတူ ပါရှိသည်။
1. မေး- UHF TV Panel Antenna သည် Vertical Polarization သို့မဟုတ် Horizontal Polarization ဖြစ်ပါသလား။
UHF TV panel antenna သည် သင့်လိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံ၍ ဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုးစွန်းနှင့် အလျားလိုက် polarization ဖြစ်နိုင်သည်။
2. မေး- UHF TV Panel Antenna ကို ဒစ်ဂျစ်တယ် TV ထုတ်လွှင့်ခြင်းတွင် အသုံးပြုပါသလား။
UHF TV panel antenna ကို analog TV ထုတ်လွှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ် TV ထုတ်လွှင့်ခြင်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်တီဗီထုတ်လွှင့်မှုလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့် ကျယ်ပြန့်သော bandwidth ရှိသည်။
3. မေး- omnidirectional TV ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် UHF TV Panel Antenna ကို သုံးနိုင်ပါသလား။
A: အဖြေကတော့ ဟုတ်ပါတယ်။
သို့သော် သင်သည် မတူညီသော လမ်းကြောင်းများကို ရင်ဆိုင်ရမည့် အနည်းဆုံး UHF TV panel အင်တင်နာ4ခုအတွက် ပြင်ဆင်ထားရန် လိုအပ်သည် ။
4. မေး- UHF TV Panel Antenna သည် ပြိုကွဲရန် လွယ်ကူပါသလား။
A: မဟုတ်ဘူး၊ တကယ်က တာရှည်ခံတယ်။
UHF TV Panel အင်တင်နာသည် မိုးရွာခြင်း သို့မဟုတ် စိုစွတ်သောလေကြောင့် သံချေးတက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်သည့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး လုံး၀ပိတ်ထားသည်။ ထို့အပြင်၊ အင်တင်နာအတွင်းရှိ အစိတ်အပိုင်းများသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအခြေခံထားပြီး လျှပ်စီးကြောင်းမှ အကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးပါသည်။
UHF TV panel antenna နှင့် ၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များကို ဤစာမျက်နှာမှတစ်ဆင့် သိရှိပါသည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင် TV station ဆောက်လိုပါသလား။ FMUSER သည် တီဗီထုတ်လွှင့်မှုထုတ်လွှင့်စက်များအပါအဝင် ပြီးပြည့်စုံသော တီဗီထုတ်လွှင့်သည့်ကိရိယာအစုံအလင်နှင့် UHF TV အကန့်အင်တင်နာပက်ကေ့ခ်ျများဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသော TV ထုတ်လွှင့်မှုအင်တင်နာစနစ်များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ TV ထုတ်လွှင့်မှုဖြေရှင်းချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ် လိုအပ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ အခုပဲ!
DB၊ DBI နှင့် DBM တို့ကို မည်သို့ခွဲခြားနိုင်မည်နည်း။